Esory ny tavy amin'ny volo - ny tetika tena miasa | Bezzia
ny olona manana volo menakaFantatr'izy ireo fa ny fanesorana menaka amin'ny volo dia tsy asa mora. Rehefa toa afaka mankafy ny volo tena kanto sy mamiratra isika, fotoana fohy aty aoriana, dia efa tsikaritray ny fomba fandotoany. Ka raha mitady antony isika dia mety misy vitsivitsy. Indraindray dia olana amin'ny volo izany saingy avy amin'ny antony hafa amin'ny génétique sy hormonina.
Indraindray hitantsika ny fomba ny hodi-doha dia mamokatra sebum betsaka kokoa noho ny mahazatra. Izany dia azontsika tsikaritra bebe kokoa amin'ny fotoana sasany toy ny fahatanorana na mandritra ny fitondrana vohoka ary fiovana hafa mety hitranga mandritra ny fiainantsika rehetra. Raha tianao esory menaka amin'ny volo, aza adino ireto torohevitra sy fika manaraka ireto satria tena hahomby aminao izy ireo.
1 Fa maninona aho no manana volo be menaka?
2 Torohevitra hanesorana menaka amin'ny volo
2.1 Sorohy ny hafanana
2.2 Aza kosehina
2.3 Aza mikasika izany
3 Ireo fanafody hanala menaka amin'ny volo
3.1 Vovoka talcum
3.4 Apple cider cuka
Fa maninona aho no manana volo be menaka?
Araka ny efa nambarantsika dia tsy fanontaniana iray ihany no valiny. Ankoatry ny olana ara-pirazanana na hormonina, izay misy fiantraikany hatrany, dia misy bebe kokoa. Mino izany na tsia, ny fanasana ny volonao amin'ny fomba tsy mety dia mety ho iray amin'ireo dingana ananantsika volo misy menaka. Ny fampiasana vokatra izay tsy zakan'ny volontsika na manasa azy mihoatra ny ilaina dia afaka manafaingana ny fizotrany. Izany dia satria maro shampoos na mety misy conditioner dia misy fiatraikany amin'ny PH an'ny hoditra. Noho izany, tsy maintsy mampiasa vokatra manokana ho an'ny volontsika isika ary manasa azy isan'andro.
Torohevitra hanesorana menaka amin'ny volo
Sorohy ny hafanana
Ny rano mafana dia iray amin'ireo antony mahatonga ny tavy hamokatra. Araraoty, araraoty ny toetrandro tsara hanasana ny volonao amin'ny rano mafana. Raha tsy zakanao ny hatsiaka dia azonao apetaka amin'ny fanasana farany. Amin'izany fomba izany dia hitafy volo mamirapiratra sy landy kokoa ianao. Toy izany koa ny fanamainana sy vy. Avelao ho maina ny volo.
Na dia fantatsika aza fa ny borosy dia mety ho tena tsara amin'ny volo, amin'ity tranga ity dia tsy dia be loatra. Ny tsara indrindra dia ny tsy fikosehana azy be loatra na ny fikosehana azy. Satria raha manao izany isika dia handrisika ny fihary atiny. Manasa ny volonao ianao ary manety azy hanala azy, fa amin'ny zavatra hafa.
Aza mikasika izany
Indraindray dia saika tsy azo ihodivirana ary na dia ho an'ny olona maro aza, fihetsika tsy voafehy. ny mikasika volo manjary ilaina izany rehefa mankaleo na mitaintain-dava isika. Tokony hiezaka ny tsy hanao izany isika. Mihoatra noho ny zavatra rehetra satria ho maloto izany ary ho matavy kokoa ianao.
Ireo fanafody hanala menaka amin'ny volo
Tsy misy toa ny vovoka talcum hanala menaka amin'ny volo. Tsy maintsy hafafinao manodidina ny faritry ny faka izy ireo. Avy eo, hikorontana ianao hanala ny ankamaroan'izy ireo ary ho hitanao ny fiovana. Raha manana volo be volo na olioly ianao dia azonao ampiasaina mandritra ny segondra vitsy ilay fanamainana mba hanesorana ireo vokatra rehetra.
Ianao dia mila ilay ranom-boasarimakirana roa izay afangaroinao amin'ny rano roa vera. Amin'io fangaro io dia tsy maintsy ataonao ny kobanina farany. Avelanao hiala sasatra mandritra ny segondra vitsy izy ary esorinao amin'ny rano indray. Tadidio fa ny voasarimakirana dia afaka manamaivana volo kely raha tratry ny masoandro. Ka tokony hatao amin'ny alina, rehefa tsy mivoaka intsony ianao.
Amin'ity tranga ity dia mifangaro izahay tamenak'atody roa misy ranom-boasarimakirana vitsivitsy. Tsy maintsy apetakao amin'ny volo mando izany. Avelao izy hiasa minitra vitsy ary esory amin'ny rano mafana. Azonao atao ny mamerina azy indray mandeha isan-kerinandro.
Tsy afaka nanadino ny vinaingitra paoma izahay. Ankoatry ny fanesorana tavy dia izy ihany koa manome antsika fahalemem-panahy sy hamirapiratra amin'ny volo. Hosorinay amin'ny rano mafana iray vera ny sotro fihinanana roa. Averinay indray fa io no famafana farany ary dia izay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fandram-bolo » Fomba fanalana menaka amin'ny volo, fika tena miasa
Uterqüe dia manolotra boky fijerena boky vaovao: "Ny tantaram-pitiavana vaovao"
Ny nofy ratsy mahazatra sy ny dikany: Misy ve ianao ...?